'मेरा गीत साहित्य नै हुन् त ?'- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
'मेरा गीत साहित्य नै हुन् त ?'
चैत्र १६, २०७५ रोशन शेरचन
काठमाडौँ — अक्टुबर, २०१६ मा जब बब डिलनले साहित्यको नोबेल पुरस्कार पाउने समचार सार्वजनिक भयो, समाचार सुन्ने हरेक व्यक्तिसँग आफ्नैखाले प्रतिक्रिया थिए  । अपवाद थिए त, गीत लेख्ने बब डिलन मात्र, जोसँग न धारणा थियो, न प्रतिक्रिया  ।
हप्तौं डिलन क्याम्प मौन रह्यो । नोबेल कमिटीले प्रेस जगत्लाई भन्यो, ‘बब डिलनका तर्फ कसैले फोन रिसिभ गरेको छैन ।’ नोबेल कमिटी सदस्य पर हास्टवर्ग भन्छन्, ‘कसैले पनि भन्न सक्छ, त्यो बेवास्ता बडप्पन हो । तर ऊ त्यही हो, जो ऊ हो ।’
मौनता भत्काउँदै २९ अक्टुबरमा टेलिग्राफको अन्तर्वार्तामार्फत डिलनले भने, ‘आश्चर्यजनक, विश्वास गर्न कठिन ।’ लेखक एडिना गन्डरसेनको प्रश्न ‘स्टकहोममा हुने नोबेल पुरस्कार वितरण समारोहमा आउनुहुन्छ ?’ डिलनको जवाफ, ‘सम्भव भए अवश्य आउनेछु ।’ डिलनको सांगीतिक टुर केही हप्ताअगाडि सकिने भएकाले उनी आउने प्रवल सम्भावना थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा सबै सम्मानित विजेताहरूले समारोहमा उपस्थित हुने उपाय पहिल्याएका थिए ।
१६ नोभेम्बरमा, डिलनको खास शैलीअनुसार सम्मान समारोहमा उनी नआउने खबर फैलियो । स्विडिस एकेडेमीलाई एक दिनअघि मात्र डिलनको पत्र प्राप्त भएको थियो । डिसेम्बरमा स्टकहोममा हुने नोबेल पुरस्कार वितरण समारोहमा आफ्ना पूर्वनिर्धारित प्रतिबद्घताहरूको कारण उनी आउन असमर्थ भए, एकेडेमीले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गरायो । साथै थप्यो ‘नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित भएकोमा डिलनले पुनः कृतज्ञता जनाएका छन् । साथै कार्यक्रममै उपस्थित भई पुरस्कार लिने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।’
नोबेल विजेताहरूलाई समारोहमा बोल्ने भाषणको तैयारीको निम्ति ६ महिनाको समय दिइन्छ । स्विडिस एकडेमीको अझैं विश्वास थियो, उनको सांगीतिक टुरले उपयुक्त समयमा डिलनलाई स्टकहोममा ल्याउनेछ । तसर्थ उनी आफैं उपस्थित भई आफ्नो भाषण पढ्न सम्भव हुनेछ । तर त्यस्तो भएन । डिलनले नोबेल ब्याङ्केट भाषणको लिखोट एकेडेमीमा पठाए । नोबेल पुरस्कार वितरणको दिन (१० डिसेम्बर) बब डिलनको ब्याङ्केट भाषण स्विडेनको निम्ति अमेरिकी राजदूत अजिता राजीले पढेर सुनाइकी थिइन् । त्यो भाषण यस्तो थियो,
सर्वप्रथम म यहाँ उपस्थित स्विडिस एकेडेमीका सदस्यहरू र अतिथिहरूमा आभार प्रकट गर्दछु ।यहाँहरूसामु उपस्थित हुन नसकेकोमा म क्षमा चाहन्छु । भौतिक रूपमा नभए पनि म भावनाको तहमा यहाँहरूसँगै छु । साथै, यस्तो गरिमायुक्त पुरस्कार पाउँदा आफू सम्मानित भएको बताउन चाहन्छु । साहित्यको नोबेल पुरस्कार पाउने कल्पना मैले कहिल्यै गर्न सकिनँ । सानै उमेरदेखि प्रस्ट देखिने किपलिङ, सा, थोमस मान, पर्ल एस बक, अल्बर्ट कामु, हेमिङ्वेका सिर्जनासँग म परिचित थिएँ र यी लेखकहरूले मलाई सधैं सम्मोहित पारेका थिए । साहित्यका यी अजंगका लेखकहरूबारे स्कुलका कक्षाकोठामा पढाइन्छ । संसारभरका पुस्तकालयमा उनीहरूका पुस्तकहरू भेटिन्छन् । मानिसहरूले एकआपसका कुराकानीमा ईश्वरझैं श्रद्घासाथ लिइने यी लेखकहरूको मउपर गहिरो प्रभाव छ । यी लेखकहरूकै पंक्तिमा उभिन पाउनुको अनुभूति शब्दातीत छ ।
मलाई थाहा छैन, यी लेखकहरूले कहिल्यै नोबेल सम्मान पाउनेबारे सोचेका हुन् ! तर मलाई लाग्छ, पुस्तक लेख्ने, कविता रचना गर्ने वा नाटक सिर्जना गर्ने हरेकले, संसारको जुनसुकै ठाउँमा बसे पनि, त्यो गुप्त सपना मनभित्र पालेको हुन्छ । सायद यति अटल गहिराइमा त्यो सपना गडिएको हुन्छ कि, उनीहरूलाई पनि त्यसबारे थाहा नहुन सक्छ । यदि कसैले मलाई नोबेल पुरस्कार पाउने सम्भावना कति छ भनेर सोध्दथ्यो भने, मेरो अनुमानमा त्यसको सम्भावना मैले चन्द्रमा टेक्नु जति नै हुन्थ्यो । तथ्य के हो भने, मेरो जन्म भएको वर्ष र त्यसपछिका केही वर्षहरूमा, विश्वमै नोबेल पुरस्कारको निम्ति सारो उपयुक्त कोही देखिएन । मेरो विचारमा म पनि त्यसैमध्येको एक थिएँ ।
यो आश्चर्यजनक खबर सुन्दा म यात्रामा थिएँ । खबरउपर राम्ररी सोच्न र आश्वस्त हुन मलाई केही मिनेट लाग्यो । मैले विलियम सेक्सपियर सम्झें, महान् साहित्यिक व्यक्तित्व । म सोच्छु, सेक्सपियर स्वयंलाई नाटककार सम्झन्थे । सेक्सपियरले आफूले साहित्य लेख्दै गरेको सायदै सोचे । वास्तवमा उनका कर्महरू नाट्यकारिताका लागि थियो । संवादको निम्ति, न कि पठनका निम्ति । जब उनी ‘ह्यामलेट’ लेखिरहेका थिए, म निश्चिन्त छु, उनी नाटकका धेरै सम्भावनाका बारे सोचिरहेका थिए । यी भूमिकाहरूको निम्ति योग्य कलाकारहरू को हुन सक्लान् ? कसरी यो नाटकलाई मञ्चन गर्ने ? के म यस नाटकलाई यथार्थमै डेनमार्कमा सेट गराउन चाहन्छु ? पक्कै सेक्सपियरको सिर्जनात्मक दृष्टि र महात्त्वाकांक्षाहरूले उनको मस्तिष्कको अग्रभाग ओगटेको हुनुपर्छ । तर साथै दोस्रो महत्त्वको अन्य पक्षहरू पनि थिए, जसलाई उनले मिलाउनैपर्थ्यो । जस्तै ः के नाटक मञ्चनको निम्ति आर्थिक स्रोतको जोहो छ ? के मैले सम्मान गर्नुपर्ने महानुभावहरूको निम्ति थिएटरमा उपयुक्त सिटहरू पर्याप्त छन् ? मान्छेको खप्परको व्यवस्था कसरी गर्ने ? म बाजी नै थाप्न सक्छु, सेक्सपियरको मनमा सुदूर प्रश्न कुनै उठेको थियो भने, त्यो अन्तिम प्रश्न यस्तो हुन्थ्यो— के मैले सिर्जेका नाटकहरू साहित्य बने ?
किशोरवयमा मैले जब गीत लेख्न थालें वा जब केही प्रशंसाहरू बटुलें, मेरो गीतप्रतिको प्रेरणा र विश्वास झन् अगाडि कुद्यो । मैले कल्पना गरें, यी गीतहरू कुनै दिन कफी हाउस र बारमा सुनिनेछन् । हुन सक्छ, कार्नेगी हल वा लन्डन पालाडियममा पनि गुन्जिएला । त्यसबेला मैले ठूलै सपना देखेको भए, त्यो आफ्ना गीतको रेकर्ड निकालेको र रेडियोमा आफ्नै गीतहरू सुन्दै गरेको थियो । मेरो विचारमा त्यो वास्तवमै ठूलो पुरस्कार थियो । रेकर्ड निकाल्नु, रेडियोमा आफ्नो गीत सुन्नु, असंख्य श्रोतामाझ पुग्नु र आफ्नो इच्छाको क्षेत्रमा केही गरिरहन पाउनु ।
जे होस्, लामो समयसम्म मैले त्यही कर्म गरिराखेको छु, जो म चाहन्थें । मैले दर्जनौं रेकर्डहरू निकालें र विश्वभर हजारौं कन्सर्टमा आफ्ना संगीतहरू प्रस्तुत गरे । तर, मलाई लाग्छ, मैले जे जति गरे पनि केन्द्रमा मेरा गीतहरू नै छन् । भिन्न संस्कृतिका बेहिसाब मानिसका जीवनमा ती गीतहरूले आफ्नो स्थान बनाएको अनुभव गर्दा म आनन्दित बन्छु । तर एउटा कुरा छ, जुन मैले भन्नैपर्छ । परफर्मरको हिसाबले, मैले पचास हजार श्रोतामाझ गाएँ । पचास जनाको सानो समूहबीच पनि संगीत प्रस्तुत गरें । म भन्न सक्छु, पचास जनाको बीचमा गाउनु धेरै कठिन काम हो । पचास हजार श्रोता वास्तवमा एउटै बृहत्तर व्यक्ति हो तर पचास जना त्यस्तो होइन । पचास जनाको समूहमा प्रत्येक व्यक्ति भिन्न हो । भिन्न पहिचान । उनीहरू गीतलाई प्रस्ट ग्रहण गर्छन् । तपाईं कति इमानदारपूर्वक गाउँदै हुनुहुन्छ ? वा आफ्नो प्रतिभासँग कति गहिरो तादात्म्य राख्दै हुनुहुन्छ ? उनीहरू बुझ्छन् । नोबल कमिटी पनि सानो हुनाले मलाई पर्याप्त परीक्षण गरेको कुरा म थाहा पाउँछु । त्यो तथ्यगत कुरा हो ।
तर सेक्सपियरझैं, मेरो सोचाइलाई पनि सिर्जनात्मक कर्म र निर्वाह गर्नै पर्ने जीवनका अन्य विषयहरूले प्रायशः व्यस्त बनाइराख्छ । यी गीतका निम्ति सबभन्दा योग्य संगीतकार को हुन सक्छ ? के म उपयुक्त स्टुडियोमा रेकर्डिङ गरिराखेको छु ? के यो नोटेसन गीतको निम्ति सही छ ? केही चीज कहिल्यै बदलिँदैन, चार सय वर्षसम्म पनि ।
कुनै पनि यस्तो समय आएन जहाँ मैले स्वयंलाई सोधेको होस्, ‘के मेरा गीतहरू साहित्य बने ?’
त्यसैले उक्त प्रश्नउपर समय खर्चेर सोची दिएको र अन्ततः सुन्दर उत्तर खोजेकोमा स्विडिस एकेडेमीलाई धन्यवाद ।
सबैमा मेरोतर्फबाट शुभेच्छा,
(नोबेल समितिको विज्ञप्तिअनुसार बब डिलनलाई अमेरिकी गीत परम्पराअन्तर्गत नयाँ काव्यिक अभिव्यक्ति सिर्जनाको निम्ति पुरस्कार दिइएको थियो ।)
प्रकाशित : चैत्र १६, २०७५ ११:३४
पूर्वलडाकुको मदिरा पसल
पुस २८, २०७५ रोशन शेरचन
काठमाडौँ — रातभर निद्रा पर्दैनतन्द्रामा उही दृश्यहरु नाचिरहन्छन्रिस उठ्छ, हुन्डरी चल्छ, ऐंठन हुन्छ आफैंसँग हार्छु गिलासमा खन्याएर पिउँछुर चैनले सुत्छु
रातभर निद्रा पर्दैन
तन्द्रामा उही दृश्यहरु नाचिरहन्छन्
रिस उठ्छ, हुन्डरी चल्छ, ऐंठन हुन्छ
गिलासमा खन्याएर पिउँछु
र चैनले सुत्छु
कसरी फेरियो समय ?
न्याय र समानताको निम्ति
गोलाबारूद बोकेर डााडाकााडा कुदेको हिजैजस्तो लाग्छ
आाखामा सपनाका चल्लाहरु कोरलेर
रातो मार्च गरेको हिजैजस्तो लाग्छ
कसरी पछारियो आकाश र
रोकियो नदीको प्रवाह ?
अयोग्य भई फर्केको सााझ
चराहरु तर्सिएर मलिन आकाशतिर उडेका थिए
आलै छ सम्झना
थकथकीले रातभर गााजिरह्यो
मानौं द्वारपाल हो त्यो चार प्रहरको
योद्वा उही हो
कसरी भयो ?
कोही अयोग्य ?
हिजोका हाम्रा नायकहरु चिल्लो वाहनमा गुड्न थाले
वर्गशत्रुलाई गोलीले उडाउन प्रशिक्षण दिनेहरु
मञ्च, मन्त्रालय, संसद्, निवासमा,
कमिसनखोर, मदिरा व्यापारी र करछलीसाग देखिन थाले
कसरी बिर्सूं ?
कृष्ण गुरूङको भाटा कारबाही
पिंडुलाको सुम्ला समाउादै कस्तरी थुचुक्कै बसेथ्यो ऊ
कस्तरी थर्थराउादै आसु चुहाएथ्यो ?
र हात जोड्दै माफी मागेथ्यो ?
आखिर ऊ बा थियो
सन्तानको भविष्यले सायद उनलाई गलाएथ्यो
छोरीेहरुका अगाडि कस्तरी
लाज र भयले कालोनीलो भाथ्यो ?
कमरेड सम्झनाले कृष्णको स्वास्नीको टाउकोमै
अचम्म, उनी डराइनन् बरू
मानौं प्रश्न गर्दै छिन्
मैले के ठूलो त्यस्तो अपराध गरें ?
मेरो अगिल्तिर पनि उभियो
जीवनका क्रूर पृष्ठहरु
मानौं मैले परीक्षा दिनैपर्छ
मन निचोरेर टिनको बाकसबाट
निखिा्रदै गएको अयोग्य लडाकु भत्ता निकाले
सााझ सहरको साागुरो गल्लीमा बोर्ड झुन्डियो
सर्वहाराको मुक्तियात्रामा निस्केको म...
आफ्नो शिर त्यति नुहेको कहिल्यै देखिना
त्यो रात बेस्सरी रोएा
हप्ता, महिना, वर्ष बिते
पसल चलेकै छ
कमिसनखोर, भ्रष्ट कर्मचारी, राजनीतिकर्मी
पत्रकार, वकिल, विद्यार्थी,
खाडी उड्ने युवा
र क्रान्तिकारी कवि
सबै खाले ग्राहकहरु आउाछन्
जहान पालेकै छु
तर निद्रा फर्काउन सकिना
कृष्णको निन्याउरो अनुहार सम्झनाको पर्दामा घुमिरहन्छ
उसका छोरीहरुका चारजोर भयग्रस्त आाखाले लखेटिरहन्छ
फेरि आफैंसाग हार्छु र
ओछ्यानबाट उठ्छु ।
प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०८:३६